Sida Loogu Baro Kanada Iyadoon Laheyn IELTS, GMAT, Hel Fiisaha Ardayga iyo Shaqada Aad 2022
Sida wax loogu barto Kanada la'aanteed IELTS, GMAT, Hel Visa Visa iyo Shaqada Aad
Wax ku barashada dibadda waa khibrad cabsi leh oo la arko laakiin barashada iyo ka shaqeynta dibedda waxay keeneysaa waxbarasho iyo madadaalo ugu dambeyn dhammaystirkeedii, halkan waxaad ku baran doontaa sida wax looga barto Kanada iyadoon lahayn IELTS isla markaana u shaqeyso sidii arday ahaan
Kanada waa mid ka mid ah waddamada ardayda caalamiga ahi eegaan marka ay raadinayaan iskuulo waxbarasho oo dibadda ah. Nidaamka waxbarashada Kanada waa mid soo jiidasho leh tanina waxay aragtay in Kanada ay sooceliso tiro badan oo ardayda caalamiga ah sanad kasta oo tacliimeed ah, laga soo bilaabo dhaadhaca barafka ee British Columbia illaa gobolka cirifka ah ee Manitoba, oo leh magaalooyin sida Toronto, Montréal, Vancouver iyo Quebec oo caan ku ah saaxiibtinimo, dulqaad iyo dhaqammo badan.
Kanada waxay caan ku tahay quruxdeeda saafiga ah, quruumaha yar ee adduunka waxay ku faani karaan wax kasta oo u dhow hodantinimada kaymaha, harooyinka, iyo buuraha. Ardayda caalamiga ah ee wax ka barta Kanada waxay badanaa uga sheekeeyeen sheekooyin waaweyn oo waddanka ku saabsan.
Kanada gudaheeda, imtixaanada gelitaanka tartanka sida SAT, MCAT, LSAT, GMAT, GRE, IELTS iyo TOEFL ayaa looga baahan yahay daraasadaha ardayda caalamiga ah.
Caadi ahaan haddii ay qasab kugu tahay inaad wax ku barato dibadda waa inaad dhibco sare ka keentaa hal ama in ka badan oo ka mid ah imtixaannadan. In kasta oo inta badan imtixaannada la qaadayo ay ku xiran tahay koorsadaada waxbarasho iyo halka aad u socoto.
Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan, uguna muhiimsan, imtixaannada gelitaanka caalamiga ee daraasadaha dibadda waxaa ka mid ah SAT, MCAT, LSAT, GMAT, GRE, IELTS iyo TOEFL. Kuwaas waxaa looga baahan yahay gelitaanka jaamacadaha iyo kulliyadaha ku yaal dalal kala duwan oo adduunka ah; mararka qaarkood, baahida ayaa noqon karta isku-dar ah mid ama in ka badan oo ka mid ah kuwan iyo imtixaanno kale / imtixaanno u gaar ah waddankaas iyo nidaamkiisa waxbarasho.
Inta badan barnaamijka deeqaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah inay wax ku bartaan Kanada waxay uga baahan yihiin inay galaan imtixaanka IELTS ama imtixaanka TOEFL laakiin ilaa dhamaadkaas, arrimuhu si dhakhso leh ayey isu beddelayaan. Waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad sifiican wax u barato hadda waa sida loogu qoro xaraf wanaagsan af ingiriisi.
TOEFL iyo IELTS ayaa laga yaabaa inay ugu sarreeyaan liiska iyada oo la tixgelinayo tirada ardayda adduunka oo dhan ee u baahan inay qaadaan mid ama mid kale si ay u muujiyaan aqoonta luuqadda Ingiriisiga.
Xulashada ugu ballaaran ee suurtogalka ah ee jaamacadaha iyo kulliyadaha waxay aqbalaan dhibcaha TOEFL, oo ​​ay ku jiraan kuwa ugu sarreeya 100 ee UK, US, Canada, Australia iyo New Zealand. IELTS waa imtixaan khasab ah oo loogu talagalay Hindida iyo dadka kale ee ku hadla Ingiriisiga ee aan u dhalan, gaar ahaan dalalka Barwaaqo Sooranka, gelitaanka jaamacadaha iyo kulleejooyinka caanka ah ee dibedda, iyo mararka qaarkood shuruudaha socdaalka sidoo kale Laakiin qaar ka mid ah waddamada Afrika ee muxaadarooyinka ka bixiya hay'adaha sare oo leh Ingiriis saafi ah, waa maxay nuxurka caddaynta in aad mar labaad taqaanno Ingiriisiga intaad horay u baranaysay oo aad ugu gudbaysay Ingiriisiga?
TOEFL waxaa lagu qabtaa 71 xarumood oo ku baahsan wadamada oo dhan, in ka badan afar jeer bishii. Waa tan liiska dhammaantood Xarumaha imtixaanka TOEFL ee Galbeedka Afrika.
Waxaa sidoo kale jira Jaamacadaha ku yaal Kanada ee aqbala SAT gelitaanka waad ka hubin kartaa iyaga maadaama SAT ay tahay xitaa imtixaan aad uga fudud.
Markaad eegto imtixaanadan waxaad ku heshiin doontaa Mid ka mid ah caqabadaha hortaagan wax ka barashada jaamacadaha caalamiga ah ayaa ah shardiga looga baahan yahay darajo wanaagsan mid ama ka badan imtixaanadan.
Tani waxay badanaa ka dhigtaa shaqeyn adag oo loogu talagalay ardayda u muuqda in ay imtixaanadaan ku celcelinayaan si ay u helaan dhibcooyin ka fiican iyo helitaanka jaamacadaha sare.
Marka, Si loogu fududeeyo ardayda inay si fudud ku helaan gelitaanka, dhowr jaamacadood oo ku yaal Kanada ayaa bilaabay inay ka tanaasulaan shuruudaha looga baahan yahay buundooyinka qaar ka mid ah imtixaannadan. Mid ka-dhaafida caanka ah waa tan IELTS.
IELTS waxay ahayd tijaabadii ugu horaysay ee ay aqoonsadaan masuuliyiinta socdaalka Kanada, markaa hadaad jeceshahay inaad u guurto Kanada, IELTS ayaa ah tijaabada kugu habboon.
Ardayda codsata jaamacadaha Kanada ee aan dalban soo gudbinta dhibcaha IELTS, si kastaba ha noqotee, waxay u baahan yihiin inay soo gudbiyaan dukumiintiyo qaarkood si ay u taageeraan sheegashadooda aqoonta luqadda Ingiriisiga. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara shahaadooyinka loo baahan yahay, dukumiintiyada sheegaya in habka wax lagu barto ee ugu horreeyay ama kii ugu dambeeyay ee la qaatay uu ahaa Ingiriis, qoraallo iyo wixii la mid ah. Kaliya waxay ku caddaynaysaa inaad wax ku baran karto Kanada la'aanteed IELTS.
Halkan waa liisto ah 10ka jaamacadood ee ugu hooseeya ee wax lagu barto Kanada waa inaad fiirisaa hadaad tixgelinayso inaad wax ku barato Kanada.
Qaar ka mid ah sharciyada guud ee xukumaya shuruud la'aanta dhibcaha IELTS ayaa ah in ardaydu ay ku hadlayaan af Ingiriisiga hooyo; ama, ardayda ka soo jeeda waddamada aan Ingiriisiga ahayn waxay heleen waxbarasho heer jaamacadeed ah oo saddex ama in ka badan oo isku xigta Ingiriisiga ah. Tani waxay khuseysaa oo keliya ardayda caalamiga ah.
Ka sokow, ardayda soo dhameeysteen qiimeynta O-Heerka ama heerka-A waxay sidoo kale ka helayaan ka-dhaafitaanka IELTS.
Jaamacadaha shaqsiyeed waxay leeyihiin ka-dhaafitaankooda iyo shuruudaha si loo caddeeyo aqoonta luqadda Ingiriisiga ee codsadaha. Liistada soo socota ayaa ah jaamacadaha aad wax ku baran karto Kanada la'aanteed IELTS:
WARSIDAHA: Fahan wanaagsan, waxaad fiirin kartaa qoraal aad u faahfaahsan oo aan wax kaga qornay JAAMACADAHA KU YIMAADA KANADA EE AAN UU U BAAHNAYN IELTS ISKU-DUUB AH OO LAGU QAADO HALKAN.
Kanada waxay soo bandhigtay xeerar fiiso cusub oo fiisaha ardayda ah oo aan kaliya ka caawinaynin hubinta in ardayda caalamiga ah ay si dhab ah wax uga bartaan jaamacadaha dalka, laakiin sidoo kale siinaysa heerar gaar ah oo xorriyadda ay ku shaqeyn karaan.
SI: Sida wax looga barto loona shaqeeyo Kanada
Tusaale ahaan, halka ardayga horay loo soo sheegey oo kaliya loo baahan yahay si uu u muujiyo ujeedo uu ku barto Kanada, hadda waxay u baahan yihiin inay caddeeyaan diiwaangelintooda kuleejka kaas oo aqbalaya ardayda caalamiga ah inay u qalmaan fiiso.
Sidaa awgeed, ardayda codsanaya fiisooyinka iyadoon la siinin dhibcaha IELTS waxay u baahan yihiin inay hubiyaan diiwaangelintooda jaamacadda ay doorteen ee aan u baahnayn waraaqaha IELTS. In kasta oo kulliyadda ay doorteen ay siiso iyaga warqad gelitaan, ardaydu waxay siin karaan dukumiintiyo taageeraya si ay u caddeeyaan kooda Aqoonta luqadda Ingiriisiga markaad codsaneysid fiiso arday.
Marka lagu daro sida wax looga barto Kanada iyada oo aan lahayn IELTS, halkan ayaa ah Liiska buuxa ee shuruudaha loogu talagalay ardayda caalamiga ah inay wax ku bartaan dibadda.
Kanada IELTSshuruudaha gelitaanka KanadaCanda ma u baahan tahay IELTShel ogolaanshaha canadasideen ku heli karaa ilaha dhala ee canadasida loo codsado gelitaanka canadaIELTSxarumaha ieltsImtixaanka IELTSielts ee canadawax ka barta koortawax ka barato Kanada iyada oo aan lahayn IELTS
Previous Post:Shahaadada Bachelor-ka Khadka Tooska ah ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah iyo Kuwa Gudaha
Post Next:Koorsooyin Jaamacadeed Online oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyinka Ardayda
Pingback: 5 Faa'iidooyinka Cajaa'ibka leh & Faa'iidooyinka IELTS ee Ardayda Caalamiga ah ee 2022
Oderinde Abayomi wuxuu leeyahay,
October 24, 2019 at 5: 05 pm
Way ila habboon tahay haddii la ii oggolaado inaan waxbarto oo aan la shaqeeyo xaaskeyga maxaa yeelay waa riyadeyda waxaan qorsheynayaa inaan ka shaqeeyo sanadkaan cusub.
November 4, 2019 at 5: 03 pm
Codso adiga iyo saygaaga / xaaskaaga markaa
Qoto dheer wuxuu leeyahay,
July 16, 2019 at 8: am 09
Mudane ii jawaab aniga wac 8980669668.
Akhriste caqli badan Rita wuxuu leeyahay,
June 12, 2019 at 12: 01 pm
Fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan wax ku barto heerka 0 ee kuliyada bulshada ee Manitoba waa maxay nidaamka iyo nidaamka, shuruudaha fadlan runtii waxaan ubaahanahay caawimaad iyo caawiye fadlan